पल कहिले बाहिर आउलान ? ज्योतिषले मिती नै तोकिदिएर भने राहु र शनीको खेल हो,पल र गायिकाको मिलन पनि हुन्छ तर…..(भिडियो सहित) – Annapurna Post News
April 21, 2022 sujaLeaveaComment on पल कहिले बाहिर आउलान ? ज्योतिषले मिती नै तोकिदिएर भने राहु र शनीको खेल हो,पल र गायिकाको मिलन पनि हुन्छ तर…..(भिडियो सहित)
कालाकार पल शाहमाथि बला,त्कारको जाहेरी दिएका पी,डितका बुबाले नै पल शाह नि,र्दोष रहेको बताएका छन् । जिल्ला अदालत तनहुँमा मंगलबार बक,पत्रका क्रममा उनले पल शाह नि,र्दोष रहेको भन्दै स,जाय नगर्न समेत माग गरेका हुन् । सुरुमा दबा,बमा परेर जा,हेरी दिएको तर अहिले बुझ्दै जाँदा पल शाह नि,र्दोष रहेको थाहा भएको उनको बक,पत्रमा उल्लेख छ ।
छोरी नाबालिग भएका कुरा उनले प्रहरीमा जा,हेरी दिएका थिए । सोमबार पी,डितसँग अदा,लतमा ब,यान हुँदा पनि उनी साथै थिए । सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरालाई लिएर आफू जा,हेरी दिन दबा,बमा परेको उनले बताएका हुन् । ‘सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरालाई लिएर म माथि केही व्यक्तिले द,बाब दिए । त्यस कारण जा,हेरी दिन बा,ध्य भएको थिएँ ।
तर जाहे,रीमा भएका कुरा झु,टा हुन् । आज मैले गरेको ब,यान साँचो हो । पछि बुझ्दै जाँदा झु,टो भएको थाहा भयो । पल शाह निर्दो,ष छन् । उनलाई स,जाय हुनुहुँदैन’, जाहेर,वालाको भनाई उदृत गर्दै पल शाहका वकिल कमलामोहन वाग्लेले भने । पल शाहको बारेमा धेरै व्यक्तीहरुले आफ्नो बिचार राखेका छन यसै क्रममा ज्योतिष गोपाल कोइरालाले पनि आफ्नो धारणा राखेका छन । उनले पलको नराम्रो ग्रह सकिएको बताएका छन अब शनी र रहुले छाडेको छ । बाकी भिडियोमा हेरौ उनले के के भने